Indawo yokuhlala yangoku, Khodynskoe Pole - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yangoku, Khodynskoe Pole
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMasha
Le ndlu ikhethekileyo ibekwe kwindawo yokuhlala yeklasi yeshishini "Liner" kumgangatho we-7, kunye nommandla okhuselekileyo, ukuhamba ngemizuzu eyi-10 ukusuka kwisikhululo se-metro se-CSKA. Esi sesinye sezona zithili zifumaneka ngokufanelekileyo eMoscow.
Zonke izinto ezikhangayo zinokufikelelwa kwimizuzu eyi-15-25, kwisikhululo seenqwelomoya saseSheremetyevo - imizuzu engama-25-30.
Amafulethi enzelwe ukuhlalisa abantu abane. Ukulungiswa kwangoku kunye nokuxhotyiswa nazo zonke izixhobo zekhaya kwenza le nto ikhululeke ukuhlala, zombini ixesha elifutshane kunye nexesha elide.
Le ndlu ifanelekile kwiintsapho ezinabantwana, izibini ezithandanayo, abakhenkethi abafuna ukuchitha ixesha kwi-capital kunye noosomashishini kuhambo lwezoshishino.
Ifulethi linamagumbi ama-2 (ikhitshi-igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala), kunye negumbi lokuhlambela kunye negumbi lokugqoka. Igumbi lokulala linebhedi enkulu ephindwe kabini enomandlalo wamathambo, kwigumbi lokuhlala ekhitshini kukho ibhedi yesofa eyi-2 yokulala. Le flethi ixhotyiswe ngazo zonke izixhobo zendlu eziyimfuneko: umatshini wokuhlamba ngesomisi, i-hob kunye ne-oven, i-oven microwave, i-air conditioning, i-cable TV, umatshini wekhofi kunye ne-Nespresso capsules, i-kettle yombane, i-wi-fi.
Indlu ibekwe kufutshane nepaki yeKhodynsky kunye neziko lokuthenga i-Aviapark elineevenkile ezininzi, kubandakanya i-Auchan, i-Ikea, i-Obi, iivenkile zokutyela, icinema, njl. Kufuphi kukho ibhotwe lomkhenkce leMegaSport, indawo yezemidlalo yeCSKA nokunye okuninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Masha